Ukuprinta ukuqwalaselwa kwe-infographics yakho
Ngu-Justin Beegel, MBA, iQela leHlabathi le-infographic
Ngaphandle kokuba unezixhobo zokuprinta ngobuchule ekhayeni lakho okanye eofisini, ukwenza umgangatho oprintiweyo wobuchwephesha bakho kunzima kunokuba ucofe umyalelo wokuPrinta kwikhompyuter yakho okanye kwiprinta. Kuya kufuneka uthathe umsebenzi wakho uwuse kwindlu yokuprinta, equka ukuba nakho ukucacisa kumshicileli kanye le nto uyifunayo.
m365 igama lesitalato sepilisi
Thetha kubantu kwiprinta yakho ngaphambi kwexesha ukubona ukuba ivenkile yabo ineemfuno ezithile zefayile yedijithali oshicilelayo kuyo okanye imida ethile ngokubhekisele kwinto abanokuyenza. Unokufuna ukuba i-infographic yakho iprintwe kwibhanile ende kwindawo yokuthengisa yezonyango, kodwa abanayo iprinta ekwaziyo ukuphatha umsebenzi.
Okanye, unokuba ebhankini kwimithwalo enzima yamakhadi angenayo. Ungagcina ixesha elininzi kunye nomzamo ukuba ulungele imiba enjalo ngaphambili uzama ukuprinta umsebenzi wakho, ke inyathelo lokuqala lihlala lithetha nabo malunga neemfuno zakho.
Ubungakanani beprinta ye-infographics
Ngokucacileyo, ubungakanani beposta yakho okanye uprinte bunokwahluka kancinci. Ukuba awunayo imfuneko ethile okanye ubungakanani obuthile engqondweni, unokukufumanisa kuluncedo ukuqwalasela obunye bobukhulu beepowusta obuzakufumana kwiivenkile ezininzi ezikhutshelwayo ezenza ushicilelo lwedijithali. Ubungakanani kule tafile, obandakanya zombini intshi kunye neemilimitha, ziyafumaneka ngoku.
Ubungakanani obuqhelekileyo bePhepha lokuPrinta kwidijithali
8.5 x 11 216 x 279 Ubungakanani beeleta ezisisiseko; esetyenziselwa iiflaya
11 x 17 279 x 432 Ubungakanani beLedger; zilungele iiposta ezincinci
18 x 24 Ngama-457 x 610 Ubungakanani obuphakathi obuphakathi beeposta
24 x 36 610 x 914 Ubungakanani obuqhelekileyo beeposta ezinkulu ezisetyenziselwa ukuthengisa
27 x 40 686 x 1016 Ebiza iphepha elinye; ubungakanani obuqhelekileyo beeposta zeemovie
36 x 48 914 x 1219 Ipowusta enkulu kakhulu (esetyenziselwa iibhena kunye nezinye)
Akukho ndlela yokuba unqunyelwe kubungakanani kule tafile. Ngapha koko, ukuba uqesha indlu eprintayo yobungcali, ubungakanani onokuthi uprinte kubo bunqunyelwe kuphela ngobungakanani boomatshini bokushicilela. Uninzi aluyi kuba nangxaki ekushicileleni ipowusta ukuya kuthi ga kuma-40 ″ (1,016mm) ububanzi, ungasathethi ke ngokunyusa ukuya kububanzi.
Kwakhona, kuba iphepha lala matshini lifika kuluhlu, ungenza ubude ngokuyintloko kuyo nayiphi na into oyifunayo (ngokusikelwa umda, kunjalo; thetha nomshicileli wakho).
Ukuba ufumanisa ukuba akukho kushicilelo kwidijithali okanye umshicileli ohambelana neemfuno zakho, kwaye ufuna into enokukwazi ukushicilela nangaphezulu, ungasoloko ufuna umshicileli wefomathi enkulu. EMntla Melika, amaziko ekopi ezentengiso (anje ngeFedEx Office kunye neStaples) ahlala enawo, kwaye anokuprinta ukuya kuthi ga kuma-60 ″ (1,524mm) ububanzi.
Kwaye kwakhona, kuba iphepha elisetyenzisiweyo liza kuluhlu, ubude obufumanekayo kuwe abupheli. Ngokuxhomekeka kwimibala oyisebenzisayo kunye nezinto eziphathekayo oziprintayo, ixabiso lingasukela kwi- $ 7 ukuya kwi-30 ngeenyawo zenyawo.
Ezi venkile zinkulu, okanye amashishini okwenza imiqondiso yendawo, zikwindlela elungileyo ukuba uprinta umsebenzi wakho kwenye ngaphandle kwephepha, njenge-mylar, i-canvas, okanye i-film positives.
Ubungakanani besithombe / isisombululo
Kuya kufuneka ubungakanani bomzobo wakho ngokobungakanani boqobo bokuprinta. Kuya kufuneka usazi isisombululo sokuprinta kumachaphaza nge-intshi (dpi). Upapasho olufana nephephandaba lushicilela isisombululo sama-200 dpi okanye ngaphantsi, imagazini eqhelekileyo inokuprinta kwi-300 dpi, kwaye imagazini ecwebezelayo okanye incwadi yokufota inokuprinta kwisisombululo se-2,400 dpi.
Isigqibo sixhomekeke ekubeni igraphic yakho izakuvela phi kwaye icekeceke kwaye icace gca ukuba ufuna okanye ufuna umfanekiso ube njani. Kwakhona, esi sesinye isihloko sokuxoxa nomshicileli wakho ngaphambi kokuba uthumele ifayile.
Emva kokumisela ubungakanani bokugqibela bokuprinta kunye nesisombululo, umzobo kufuneka ubungakanani be-100% kuxwebhu lokushicilela.
Ifomathi yefayile yefayile
Jonga ukuba loluphi uhlobo lwefayile olwamkelwa ngumshicileli. Phakathi kwezona zisetyenziswa kakhulu zii-AI, i-EPS, iJPG / JPEG, kunye neefayile zePDF. Ifomathi yeGIF ilungile kwimizobo yewebhu esisiseko kunye nopopayi olula.
Ezinye iintlobo zibandakanya i-PNG, elungileyo kwiifayile ezincinci, kunye neefayile ze-TIFF kunye ne-BMP. Ezi ntlobo zeefayile ziqhelekileyo zinokuguqulwa ngaphambi kokuba uzingenise.
ibhontshisi vs igesi x
Umahluko omnye ekufuneka ujongile kumshicileli wakho yiyo nayiphi na ifonti emileyo engafakwanga kwi-infographic yakho. Ukuba umshicileli wakho akanayo loo fonti, abanako ukuprinta i-infographic yakho njengoko uyileleyo. Ukuba ifonti ifakiwe njengomfanekiso, nangona kunjalo, ayizukuba yingxaki. Awunakukhathazeka ngale nto ngeefayile ezihlengahlengisiweyo, umzekelo.
Ukuba ifonti ayifakwanga, kuya kufuneka uyibandakanye nefayile equlathe i-infographic yakho oyithumela kumshicileli wakho. Yazi, nangona kunjalo, ukuba uninzi lwamagama angaxhomekekanga aphantsi kwelayisensi, oko kuthetha ukuba ngokobuchwephesha akufuneki uwasasaze, nokuba ubhatele ifonti.
Ngamanye amaxesha kungumbono olungileyo ukuba ube nefonti yogcino engqondweni ukuba imeko yoshicilelo ayinakusonjululwa ngokukhawuleza.
Ushicilelo lwe-infographics luphuma igazi
Ukuba umfanekiso wakho uya emaphethelweni epowusta okanye uprinte, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uwandisa umfanekiso wakho odlulileyo ukuba uya kuba yintoni ubukhulu bawo. Indawo eyandisiweyo yokuprinta ibizwa ngokuba ligazi, kwaye umshicileli unciphisa okongeziweyo, eshiya umda ococekileyo. Into ongayifuniyo kukuphela kwendawo engenanto phakathi kwe-infographic yakho kunye nomda wephepha okanye iposta.
Iimfuno zokuphuma kwegazi ziyahluka ngokushicilela, kodwa i-3mm-malunga nesihlanu kwisi-intshi-ngokubanzi ubuncinci.
Ngaba ibhotolo yamandongomane ine potassium
i-amlodipine 5 mg elona xesha lilungileyo lokuthatha
Ukusebenzisana kweziyobisi kwiwebhu
iintlungu zangaphezulu ezantsi esiswini phantsi kweembambo
Uyenza njani igrafu kwi-polynomial
ungayithatha i-naproxen nge-hydrocodone